Dia Level 27 manomboka eny tamim-pahatsorana ampy, sira mbola kely 'Matrix’ ny naato vato. Misy vitsivitsy Soso-kevitra mora raisina sy toro-hevitra ho an'ny mahazo amin'ny alalan'ny dingana ity amin'ny marina avotra isan'ny biby fiompy sy mendrika isan'ny kintana ho Kiraro!
Voalohany indrindra ny tsara ny mahalala fa biby fiompy ihany no nidina iray isaky ny mandeha, dont nisahirana Miezaka ny hitondra intsony any an-dafin'ny ny birao raha toa ny biby dia Foana, izany fotsiny asa fanaony. Raha ny biby dia amin'ny try tezitra be foana isika ary hiaraka vato manodidina azy io, na tanjona ho an'ny sasany combos lehibe sy mampiasa firecracker!
Ampiasao amim-pahendrena ny balaonina! Misy olona maro miloko balaonina natsipy manodidina amin'ny solaitrabe izany ary mety ho tena mora raisina. Ampiasao azy ireo mazava tsara ny biby ambany biriky na hiaraka ny amoron 'ny biriky miloko ihany. Ny hany zavatra tsara kokoa noho ny mampiasa ny iray baolina fingotra kilalao mba hanao ny sasany combos lehibe dia ny mampiasa roa (samy hafa loko …mazava ho azy fa!)
Nahantona kilalao miendrika biriky na iza na iza?
Tadidio ambaratonga ity dia manana vitsivitsy ny hetsika, 60 Raha ny marina ary ianao 8 biby fiompy mamonjy aoka izany no hahatanterahanareo ny 'dilly dally’ ho faran'izay kely, mikarakara ny raharaham-barotra aloha, izany dia tsy lalao playtime!
Manapoaka tsipoapoaka toy ny mahazatra ny namanao, raha mahazo iray mampiasa azy io mba hitondra ny biby fiompy midina, tsy be hevitra amin'ny famonjena izany, na ny 'andro orana’ dia ho eo aminareo, dieny mbola tonga saina ianao!
Mikendry ny hanala rehetra loko ny baolina iray ny hevitra lehibe, balaonina dia mora raisina fa tsy ilaina ny manao izany. Scoring kintana telo no tsara ao an-tsaina foana fa ny laharam-pahamehana dia ny fanavotana ny mahantra kely biby fiompy! Miasa fotsiny andry iray amin'ny fotoana iray dia hanana izany dia atao amin'ny fotoana tsy. Raha manana hetsika sisa izany dia mainka hanampy ny isa, na afaka hametraka ny biby koa dia asa scoring hevitra sasany. Hiaro anao mailo ny hetsiky vato! dia afaka fahasamihafana lehibe ny isa indrindra raha mitambatra misy miara-!
Fanesorana loko rehetra afa-tsy iray afaka manao ny hevitra lehibe sasany scoring!